China Blueberry, murabheri, murobheri, sitirobheri, raspberry, red bayberry, cranberry processing machine uye mutsara wekugadzira fekitari nevagadziri |JUMP
Blueberry, blackberry, mulberry, sitirobheri, raspberry, red bayberry, cranberry processing machine uye mutsara wekugadzira.
Blueberry, blackberry, mulberry, sitirobheri, raspberry, tsvuku bayberry, cranberry yekugadzirisa muchina uye mutsara wekugadzira unogona kuburitsa muto wakajeka, turbid juice, juice concentrate, poda yemichero, jamu yemichero nezvimwe zvigadzirwa.
Blueberry, blackberry, mulberry, sitirobheri, raspberry, red bayberry, cranberry processing machine uye mutsara wekugadzira unogona kuburitsa muto wakajeka, turbid juice, juice concentrate, fruit poda, jamu yemichero uye zvimwe zvigadzirwa. , muchina wekutarisa, air bag juicer, enzymolysis tank, decanter, ultrafilter, homogenizer, degassing muchina, sterilization muchina, kuzadza muchina, Standard muchina uye zvimwe zvikamu zvemidziyo.Iyi mutsara wekugadzira wakagadzirwa nepfungwa yepamusoro uye yakakwirira degree ye automation;Midziyo mikuru yose yakagadzirwa nesimbi yemhando yepamusoro, iyo inosangana zvizere nezvinodiwa zvehutsanana zvekugadzira chikafu.
* Kugadzirisa huwandu kubva pamatani matatu / zuva kusvika 1500 matani / zuva.
* Inogona kugadzira hunhu hwakafanana hwemichero, senge blueberries, blackberries, raspberries, strawberries uye mamwe mabheri.
* Inogoneka muchero mutsva uye muchero wakaomeswa nechando
* Majusi ane airbags muto, nitrogen inogona kuzadzwa kudzivirira, anti-oxidation;Muto wejusi, kunaka kwejusi kwakanaka.
* Pasteurization, inogona kunyatso chengetedza ruvara uye kunhuhwirira kwechibereko chepakutanga
* Ne enzymatic hydrolysis uye ultrafiltration, kuwana zvakajeka uye translucent muto zvigadzirwa.
* Yakakwira dhigirii re automation yemutsara wese, pasina kushandisa akawanda manpower.
* Inouya nekuchenesa system, iri nyore kuchenesa.
Blueberry, blackberry, mulberry, sitirobheri, raspberry, tsvuku bayberry, cranberry yekugadzirisa muchina uye mutsara wepakeji yekugadzira: bhodhoro regirazi, PET bhodhoro repurasitiki, zip-yepamusoro can, aseptic nyoro pasuru, zvidhinha katoni, gable pamusoro katoni, 2L-220L aseptic bhegi mukati dhiramu, carton package, plastic bag, 70-4500g tin can.
Blueberry, blackberry, mulberry, sitirobheri, raspberry, red bayberry, cranberry processing machine uye mutsara wekugadzira:
Sarudza zvinyoro uye zvakakura zvekushandisa uye sukurudza nemvura kaviri.
Muchero wekutanga wekirasi: zviyo zvitsvuku zvakasvibirira ≤ 5%, michero yakaora ≤ 5%, kuiswa ≤ 3%;
Chibereko chechipiri chechipiri: zviyo zvitsvuku zvakasvibirira ≤ 6%, michero yakaora ≤ 8%, kuiswa ≤ 5%.
Zvinyorwa zvepanyama uye zvemakemikari: shuga yehuwandu ≥ 0.04g / ml, asidi yakazara ≥ 25g / kg, asidi inoputika ≤ 3 × 10-4g / ml.
Kuchenesa: kusati kwaita juicing, muto unofanirwa kucheneswa zvakakwana uye zvikamu zvakaora uye zvakasvibiswa zvinofanira kubviswa.Nokuti zvinhu zvakasvibirira zvinowanzomanikidzwa neganda, kana zvisina kucheneswa, guruva uye tsvina zvichaunzwa mumuto uye zvinokanganisa kunaka.Iyo yakanyanya kuyerera mwero weiyo 20L / min-23l / min, uye kureba pakati pemuromo nemuchero ndeye 17cm-18cm.
Izvo zvinodikanwa kupwanya muto usati wasvina kuti ugadzire kudzvanya nekutsikirira nzira yekuvandudza goho rejusi rezvigadzirwa.
Muto wacho unowedzerwa nekunze kwema mechanical pressure.Zvinoenderana nezvinodiwa zve bioengineering enzymolysis uye juicing tekinoroji, dhizaini yekufananidza dhizaini uye kusarudzwa kwemidziyo yemushonga wemuto uye yekuparadzanisa system yakaitwa;uye nzvimbo yekuchengetera inotonhora yakavakwa kuti iwedzere nguva yejuicing yemaberry emusango kubva pamazuva makumi matatu anoenderana nenguva yekunhonga (nguva yekunhonga ndiChikunguru naNyamavhuvhu gore rega rega), uye kusvika ku45-60 mazuva ekushanda, ayo akavandudza zvakanyanya chiyero chekushandisa kwemidziyo. uye mabhenefiti ehupfumi eiyi mutsara wekugadzira muto.
Bvisa zvimedu zvakakora kana zvimedu zvakamiswa zvakapararira mujusi.Hukuru hwegomba resefa hunosvika 0.5mm.
Iyo pectin iri mujusi ichaita kuti muto uwedzere, mukuwedzera, unogona kudzivirira zvimwe zvinhu uye kutadzisa kujekeswa kwejusi.Pectinase inoshandiswa ku hydrolyze iyo pectin mujusi yemuchero, kuitira kuti zvimwe zvinhu zviri mujusi zvirasikirwe nekudzivirirwa kwepectin uye zvinonamira pamwe chete kuti zvizadzise chinangwa chekujekesa.Kazhinji, iyo dosage yekugadzirira enzyme ndeye 0.2% - 0.4% yemhando yemuchero wemuchero, uye tembiricha inodzorwa pa50 ℃ kwe3-4 h.
Kudzivirirwa kwemavara, enzyme inactivation uye sterilization
Muchero wemusango weblueberry wakapfuma mune antioxidant zvikamu VC, VE uye β - carotene.Pamusoro pezvo, ine zvakare akasiyana-siyana emvura-anonyungudika anthocyanins emvura, ayo ane yakanaka kwazvo yekurapa mhedzisiro pazvirwere zvakawanda zveophthalmic.Naizvozvo, zvinodikanwa kushandisa kudzivirira kwemavara uye enzyme inactivation tekinoroji kuti uwedzere kuchengetwa kwezvinhu zvinoshanda mukugadzirisa.Sterilization ndeyekuuraya tupukanana kudzivirira kuparara, imwe yacho ndeye kumisa enzyme basa kudzivirira kuitika kwekuchinja kwakasiyana kwakasiyana.Ultra yakakwirira tembiricha instantaneous sterilization yakashandiswa.
Nenzira iyi, nguva yekufungidzira inogona kupfupiswa uye ruvara uye kunaka kwejusi zvinogona kuchengetedzwa.Mushure mekugadzirisa, mamwe acho anochengetwa uye anotengeswa semuto wakadzika, uye mamwe anoshandiswa sezvinwiwa zvinovaka muviri.
Zvakapfuura: Mango, pineapple, papaya, guava kugadzirisa muchina uye mutsara wekugadzira
Zvinotevera: Olive, plum, bayberry, peach, apricot, plum yekugadzirisa muchina uye mutsara wekugadzira
Corn Starch Yakwana Kugadzira Mutsetse WeFlour ...
Tomato Ketchup Yekuzadza Muchina Tomato Salsa Fil...
Aqua Hydroponics Poly-dzimba Chimiro Chirongwa
Factory Direct Sales Industrial Metal Detector ...